Dowlada dalka spain oo magacaawday safiirka galmada maxay tahay sababta - Hablaha Media Network
Dowlada dalka spain oo magacaawday safiirka galmada maxay tahay sababta
HMN:- Boqaradda Dalka Spain ayaa magacaawday Wasiirka Galmada ee Dalka Spain,waxaa ay arrintan ka dhalatay kaddib markii uu hoos u dhacay taranka iyo tirade Dadka Spaanishka ah.
Dalka Spain waxa haweenay loo magacaabay wasiirka galmada oo shaqadeedu noqon doonto sidii ay dadka ugu qancin lahayd in ay mashquul ku ahaadaan hawshaas iyada ah.
Arrintani waxay ka dhalatay ka dib markii la ogaaday in hoos u dhac weyni ku yimid Guurkii iyo tarankii Isbaanishka.
Wasiirkan waxa laga filayaa in ay kor u qaaddo waxsoosaarka Dadeed ee reer Spain, si ay carruur badan u dhalaan.
Khubarada arrimaha qoyska ee reer Isbayn waxay lee yihiin dalka waxa ku habsatay macalluul dhanka Galmada ah “Sex Famine”.
Dalka Spain waa mid ka mid ah Waddamada Yurub ee dhaqaalaha heysta mana jecla qaadashada dadka soo galowga ah,waxaana hadda ay doonayaan in la xoojiyo guurka is oggol si loo helo jiil beddela dadka hadda nool.
Heerka kororka dhalashada ee Spain ayaa tan iyo 2012kii ahaa 0%,waxaana arrintan walaax ka muujiyay Dadka Dalka Spain, oo ay hadda tiradoodu tahay 47 Milyan oo qof.